ကလေးက ဝတုတျနတောပဲ လို့ပွောခံရရငျ နောကျနဖြေ့ားရော .. အဲလိုဖွဈတာကို အံ့မိခွငျးလို့ချေါပါတယျ .. - Latest Myanmar News
ကလေးက ဝတုတျနတောပဲ လို့ပွောခံရရငျ နောကျနဖြေ့ားရော .. အဲလိုဖွဈတာကို အံ့မိခွငျးလို့ချေါပါတယျ ..
ကလေးက ဝတုတျနတောပဲ လို့ပွောခံရရငျ နောကျနဖြေ့ားရော .. အဲလိုဖွဈတာကို အံ့မိခွငျးလို့ချေါပါတယျ(အံ့မိခွငျးပြောကျစဖေို့)
အံ့မိခွငျး အံ့မိတယျဆိုတာဘာဖွဈတာလဲ အရောငျးအဝယျတှကေောငျးနရေငျးကနေ ဗွုနျးကနဲ လာဘျတှတေိတျသှားတယျ ဈေးရောငျးအား ကသြှားတယျ ငှတှေဝေငျနရေငျး ငှဝေငျရပျသှားတယျ ကနျြးမာရေးကောငျးနရေငျးကနေ ဖောကျသှားတယျ….
စသဖွငျ့ပေါ့နျော … အကောငျးတှကေနေ မကောငျးဖွဈသှားတယျဆိုတာ တဈကယျတော့အံ့မိသှားတာ။
ဘာကွောငျ့အံ့မိလဲဆိုတော့ ဥပမာ ကြှနျတျောအဝတျအစားအသဈဝတျတာမွငျရငျ ” ဟာ …လနျးနပေါလား… အံမယျ … အဆငျပွနေပေါလား လှလို့ ပလို့ ဝလို့ပါလား ” အဲလို အံ့ဩတကွီးပွောခံရရငျ အံ့မိပါတယျ
ရှတှေငှေတှေနေဲ့အပွငျသှားတယျ အဲ့မှာကိုယျ့ကိုမွငျတဲ့သူတှကေ ဟာ….. မငျးကွညျ့ကောငျးလာတယျ ဈေးတှကေိုယျအရမျးရောငျးနရေတဲ့အခါမှာ ဟာ…အရမျးရောငျးရတယျနျော
မငျးကိုအားကတြယျ…. အဲ့လိုမြိုးကိုယျ့ကိုပွောလာတဲ့စကားတှကေ ကာယကံရှငျကိုထိပါတယျ အံ့မိစပေါတယျဗြာ
ကလေးလေးဝဝတုတျတုတျလေးကို သနပျခါးအဖှေးသားလူးပီး ရပျကှကျထဲချေါသှားတော့ဘေးကလူတှကေ ဟယျနငျ့ကလေးလေးကဝတုတျနတော ပဲ ခဈြစရာကွီးနျော
အံ့သွတကွီးခြီးကြူးကွတာ အဲ့လိုဆိုအဲ့ကလေးဘာဖွဈသှားလဲသိလား နောကျရကျနမေကောငျးဖွဈတာ အဲ့လိုလုပျမပွောစခေငျြဘူး မလုပျစခေငျြဘူး တားလို့မရပါဘူး
ပုထုစဉျလူသားတှမေို့ မပွောပဲလညျးမနနေိုငျကွပါဖူး ကိုယျ့ကိုလာပွောတဲ့လူတှကေိုလညျး အဲ့လိုလာမပွောနဲ့လို့လိုကျပွောနရေငျပါးခသြှားမှာ အဲလိုမပွောမိအောငျ မုဒိတာပှားပေးရပါတယျ သူလှတာက ကုသိုလျကောငျးလို့ လှတာ ဒီထကျမကလှပါစေ
ကနျြးမာပါစေ ခမျြးသာပါစေ အဲလိုလေး မုဒိတာပှားပွီးဝမျးသာပေးရပါတယျ ကြှနျတျောတို့ဆရာမငျးနိူငျရဲ့တပညျ့မြားလညျး အဲဒီမုဒိတာစိတျလေးဝငျအောငျ ကွိုးစားပွီးကငျြ့နကွေပါတယျ အဲဒီမုဒိတာစိတျလေးဟာ တူသောအကြိုးကို ကိုယျလညျးထပျတူရပါတယျခငျဗြာ…..
အံ့မိရငျလှတျအောငျလုပျတဲ့နညျးရှိပါတယျ ထမငျး ပူပူနှေးနှေး တဈပနျးကနျ ခူး။ ကွကျဥပွုတျ တဈလုံး အခှံနှာ ထညျ့။ နှငျးဆီပနျး အနီရဲရဲ တဈပှငျ့ကနေ ပှငျ့ဖတျတှေ ခွှယေူပွီး ထမငျးပျေါ ပှငျ့ဖတျတှေ ဖွူးပါ….အဲဒီ ပနျးကနျကို အမွငျ့ တဈနရောမှာ တငျ။
အံ့မိခွငျးနှငျ့ ဆိုငျသော နတျမြားအား ကပျလှူပါသညျ။ အံ့မိခွငျး၊ ခမညျးလိုခွငျး စသညျ့အထှထှေမှေ အကြှနျပျမှ အစပွု၍ တဈမိသားစုလုံး ကငျးလှတျငွိမျးရပါလို၏ ။
အဲလို ပွောပွီး ကပျ။ အနညျးဆုံး ခွောကျနာရီတော့ ထား။ ခွောကျနာရီကြျောရငျ စှနျ့။ စှနျ့ပွီးရငျ ဘယျသူမှ မစားရ။ အားလုံးအလုပျအကိုငျတှအေစဉျပွပေီး စီးပှားတိုးတကျအဆငျပွကွေပါစေ……အံ့မိခွငျးကငျးကွပါစေ…..
အနုပညာလောကမှာရှိသောသူမြားအတှကျမျောဒယျလျမြား သီခငျြးဆိုသူမြား ဖကျရှငျရှိုးလြှောကျသူမြားအနုပညာဖွငျ့အသကျမှေးဝမျးပွုသူမြားအားလုံးမှာ ရငျထဲမှာတုနျလှုပျခွောကျခွားခွငျး ဘာမှနျးမသိတခုခုထိတျလနျ့ခွောကျခွားခွငျး စိုးရိမျပူပနျခွငျး ဒေါသထှကျထှကျခွငျးစိတျတိုနခွေငျး အဲသလို မကွာ မကွာ ဖွဈနတေတျပါတယျ။
အဲလိုဖွဈနခွေငျးဟာ အံ့မိနခွေငျးကွောငျ့ဖွဈပါတယျ….. အဲလိုတှဖွေဈနခေဲ့ရငျ အခုအံ့မိခွငျးယတွာကို ၁ ပတျတခါဖွဈစေ ၁၀ ရကျတခါဖွဈစေ ပွုလုပျလို့ရပါတယျခငျဗြာ….
ကလေးက ဝတုတ်နေတာပဲ လို့ပြောခံရရင် နောက်နေ့ဖျားရော .. အဲလိုဖြစ်တာကို အံ့မိခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်(အံ့မိခြင်းပျောက်စေဖို့)
အံ့မိခြင်း အံ့မိတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲ အရောင်းအဝယ်တွေကောင်းနေရင်းကနေ ဗြုန်းကနဲ လာဘ်တွေတိတ်သွားတယ် ဈေးရောင်းအား ကျသွားတယ် ငွေတွေဝင်နေရင်း ငွေဝင်ရပ်သွားတယ် ကျန်းမာရေးကောင်းနေရင်းကနေ ဖောက်သွားတယ်….
စသဖြင့်ပေါ့နော် … အကောင်းတွေကနေ မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ တစ်ကယ်တော့အံ့မိသွားတာ။
ဘာကြောင့်အံ့မိလဲဆိုတော့ ဥပမာ ကျွန်တော်အဝတ်အစားအသစ်ဝတ်တာမြင်ရင် ” ဟာ …လန်းနေပါလား… အံမယ် … အဆင်ပြေနေပါလား လှလို့ ပလို့ ဝလို့ပါလား ” အဲလို အံ့ဩတကြီးပြောခံရရင် အံ့မိပါတယ်
ရွှေတွေငွေတွေနဲ့အပြင်သွားတယ် အဲ့မှာကိုယ့်ကိုမြင်တဲ့သူတွေက ဟာ….. မင်းကြည့်ကောင်းလာတယ် ဈေးတွေကိုယ်အရမ်းရောင်းနေရတဲ့အခါမှာ ဟာ…အရမ်းရောင်းရတယ်နော်
မင်းကိုအားကျတယ်…. အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုပြောလာတဲ့စကားတွေက ကာယကံရှင်ကိုထိပါတယ် အံ့မိစေပါတယ်ဗျာ
ကလေးလေးဝဝတုတ်တုတ်လေးကို သနပ်ခါးအဖွေးသားလူးပီး ရပ်ကွက်ထဲခေါ်သွားတော့ဘေးကလူတွေက ဟယ်နင့်ကလေးလေးကဝတုတ်နေတာ ပဲ ချစ်စရာကြီးနော်
အံ့သြတကြီးချီးကျူးကြတာ အဲ့လိုဆိုအဲ့ကလေးဘာဖြစ်သွားလဲသိလား နောက်ရက်နေမကောင်းဖြစ်တာ အဲ့လိုလုပ်မပြောစေချင်ဘူး မလုပ်စေချင်ဘူး တားလို့မရပါဘူး
ပုထုစဉ်လူသားတွေမို့ မပြောပဲလည်းမနေနိုင်ကြပါဖူး ကိုယ့်ကိုလာပြောတဲ့လူတွေကိုလည်း အဲ့လိုလာမပြောနဲ့လို့လိုက်ပြောနေရင်ပါးချသွားမှာ အဲလိုမပြောမိအောင် မုဒိတာပွားပေးရပါတယ် သူလှတာက ကုသိုလ်ကောင်းလို့ လှတာ ဒီထက်မကလှပါစေ
ကျန်းမာပါစေ ချမ်းသာပါစေ အဲလိုလေး မုဒိတာပွားပြီးဝမ်းသာပေးရပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဆရာမင်းနိူင်ရဲ့တပည့်များလည်း အဲဒီမုဒိတာစိတ်လေးဝင်အောင် ကြိုးစားပြီးကျင့်နေကြပါတယ် အဲဒီမုဒိတာစိတ်လေးဟာ တူသောအကျိုးကို ကိုယ်လည်းထပ်တူရပါတယ်ခင်ဗျာ…..
အံ့မိရင်လွတ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းရှိပါတယ် ထမင်း ပူပူနွေးနွေး တစ်ပန်းကန် ခူး။ ကြက်ဥပြုတ် တစ်လုံး အခွံနွာ ထည့်။ နှင်းဆီပန်း အနီရဲရဲ တစ်ပွင့်ကနေ ပွင့်ဖတ်တွေ ခြွေယူပြီး ထမင်းပေါ် ပွင့်ဖတ်တွေ ဖြူးပါ….အဲဒီ ပန်းကန်ကို အမြင့် တစ်နေရာမှာ တင်။
အံ့မိခြင်းနှင့် ဆိုင်သော နတ်များအား ကပ်လှူပါသည်။ အံ့မိခြင်း၊ ခမည်းလိုခြင်း စသည့်အထွေထွေမှ အကျွန်ပ်မှ အစပြု၍ တစ်မိသားစုလုံး ကင်းလွတ်ငြိမ်းရပါလို၏ ။
အဲလို ပြောပြီး ကပ်။ အနည်းဆုံး ခြောက်နာရီတော့ ထား။ ခြောက်နာရီကျော်ရင် စွန့်။ စွန့်ပြီးရင် ဘယ်သူမှ မစားရ။ အားလုံးအလုပ်အကိုင်တွေအစဉ်ပြေပီး စီးပွားတိုးတက်အဆင်ပြေကြပါစေ……အံ့မိခြင်းကင်းကြပါစေ…..
အနုပညာလောကမှာရှိသောသူများအတွက်မော်ဒယ်လ်များ သီချင်းဆိုသူများ ဖက်ရှင်ရှိုးလျှောက်သူများအနုပညာဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းပြုသူများအားလုံးမှာ ရင်ထဲမှာတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားခြင်း ဘာမှန်းမသိတခုခုထိတ်လန့်ခြောက်ခြားခြင်း စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း ဒေါသထွက်ထွက်ခြင်းစိတ်တိုနေခြင်း အဲသလို မကြာ မကြာ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
အဲလိုဖြစ်နေခြင်းဟာ အံ့မိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်….. အဲလိုတွေဖြစ်နေခဲ့ရင် အခုအံ့မိခြင်းယတြာကို ၁ ပတ်တခါဖြစ်စေ ၁၀ ရက်တခါဖြစ်စေ ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ….
Categories ဗေဒင် Tags အံ့မိခွငျ Post navigation